Trinh Ba Phuong: lahatsary fanolorana an’ilay Vietnamiàna mpikatroka ho an’ny zo momba ny tany · Global Voices teny Malagasy
Fotoana fohy talohan'ny fisamborana azy, mitantara i Trinh Ba Phuong
Voadika ny 18 Oktobra 2020 16:00 GMT
Trinh Ba Tu sy Trinh Ba Phuong (havanana) mitazona takelaka milaza hoe : “Fahafahana ho an'ny reniko” nandritra ny fivavahana faobe ho an'ireo niharan'ny tsy rariny. Loharano: Facebook Trinh Ba Phuong
Ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny Tetikasa “The 88 Project”, tranonkalam-baovao tsy miankina mandrakotra ny avy any Vietnam, ary naverina nokiraina sy navoakan'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Ity antsafa ity, nifanaovana tamin'i Trinh Ba Phuong, mpikatroka ho an'ny zo momba ny tany, dia natao taloha kelin'ny nisamborana azy tamin'ny fiandohan'ny volana Jona 2020. Maharakotra lohahevitra isankarazany ity lahatsary nifanaovan'ny mpinamana akaiky ity, miainga avy amin'ny làlana nodiaviny ka hatramin'ny fifandraisany amin'ny vadiny – “Tena miokarakara ve izy. Ary tsy hainy ny mandainga,” hoy izy mivazivazy – ary hatramin'ireo nofinofiny sy hetahetany ho an'i Vietnam.
Olona mahay mandresy lahatra sy mitodika betsaka amin'ny fianakaviana i Phuong. “Heveriko fa diso moramorain-javatra loatra aho, tsy mba karazan'ireo sarotiny,” hoy izy rehefa nangatahana mba hanolotra momba ny tenany. Na ilay manamboninahitry ny filaminam-bahoaka notendrena hanaraka azy nandritry ny taona maro aza dia niteny fa lehilahy mahafinaritra izy, mivazivazy rehefa miresaka amin'ny mpaka am-bavany. Ho valin'ny fanontaniana hoe “Inona avy no nofinofinao?”, mitsiky i Phuong no sady mamaly fa: “Olona tsotra fotsiny aho.” Maniry fatratra ny hahasalama ny ankohonany sy hananany asa marin-toerana tanterahan'ny tànany.
Ny ray sy reniny, Can Thi Theu sy Trinh Ba Khiem, hatramin'ny rahalahiny, Trinh Ba Tu, dia samy mpikatroka avokoa. Ao anatin'ilay lahatsary, hazavain'i Phuong ny fomba nanombohany ny sehatry ny fikatrohana taorian'ny fisamborana ireo ray aman-dreniny tamin'ny 2014. Ny tanjon'ny hetsika ataony dia mihodidina ny resaka rariny ho an'ireo vondrompiarahamonina atao anjorom-bàla, toy ny ao amin'ny distrikan'i Duong Noi, faritra iray ao Hanoi, toerana niaviany, ary ny kaominina Dong Tam, mbola isan'ireo faritra mitatra avy ao Hanoi koa. “Hatramin'ny nanagadàna tsy an-drariny ny ray sy reniko, ary nanaovana famoretana tamin'ireo mpiray vohitra aminay sy nangalarana ny tanin-dry zareo, faniriako ny hanampy azy ireo hiverenan'ny fananany indray,” hoy izy manazava. 19 taona i Phuong fony nosamborina voalohany ireo ray aman-dreniny.
Tato anatin'ny taona vitsy farany, nisotasotàna i Phuong ary narahan'ireo mpitandro filaminana maso, indrindra fa taorian'ny nanandramany hizara ho an'ny daholobe ireo vaovao momba ilay bemidina nataon'ny pôlisy vao mangiran-dratsy tao amin'ny kaominina Dong Tam tamin'ny Janoary 2020. Maty tamin'ilay bemidina i Le Dinh Kinh, mpitarika sady mpikatroka iray momba ny tany ao an-toerana, sy pôlisy telo. Ny 24 Jona, nohodidinin'ireo manampahefana ary nidirany amboletra ny tranon'i Phuong dia nosamborin’-dry zareo izy; Theu, reniny koa dia nosamborina taty aoriana kelin'io, tany amin'ny toerana hafa, hatramin'ny rahalahiny Tu. Ny Artikla 117 amin'ny Fehezandalàna Famaizana nivoaka tamin'ny 2015, miresaka momba ny fanaovana “fampielezankevitra manohitra ny fanjakàna” no iampangàna azy ireo.” Mbola voatàna mandra-piandry ny fitsaràna azy izy telo ireo tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsary ity.
Ity antsafa ity dia maneho sary iray tena lalina momba an'i Phuong izay mety ho hitan'ireo mpanaramaso amin'ny alàlan'ireo potipotin-dahatsoratra nosoratany tao amin'ny media s^osialiny, ireo lahatsoratra avy amin'ny mediam-panjakàna, ary ireo sombiny zara raha misy avy amin'ireo media iraisampirenena, sy ahafahan'i Phuong mitantara ny aminy araka ny fomba filazany azy manokana.
Kendren'ny “The 88 Project” ny hanasongadina ireo lafy isankarazany iainan'ireo mpikatroka mba hnanaovana tsindry ho famotsorana azy ireny sy hampitàna ny fahendren'izy ireny ho amin'olona maromaro kokoa. Antenainay mba ho takatr'ireo mpijery fahitalavitra ny antony lalina ara-tsôsialy sy manokana tokony hanafahana an'i Phuong sy ireo olona hafa migadra noho ny resaka pôlitika.
Fampahafantarana misimisy kokoa an'i Phuong
Tamin'ny 2008, namoaka fanambaràna iray ireo manampahefana, fanambaràna momba ny fakàna tany ao amin'ny vohitr'i Duong Noi sy ny fandoavana ny fanonerana izany, izay tena ambany dia ambany be tokoa. Nisy tokantrano 356 nandà tsy handray ilay fanonerana ary niaraka nandray anjara tamin’ hetsipanoherana iray naharitra. Tamin'ny 2014, ireo ray sy renin'i Phuong dia samy voasambotra sy nosaziana hifonja 18 sy 15 volana tsirairay, rehefa nandrakitra an-tsary ny fakàna tany nataon'ny governemanta. Mbola voasambotra indray ny reniny tamin'ny 2016.
Ny Febroary 2018, napetraka ho ambany fanarahamaso i Phuong nandritra ny Taombaovao Manaraka ny Volana. Tamin'ny fiandohan'ny Oktôbra 2019, tsy navela hivoaka ny tranony izy tamin'ny andro fankalazàna ny fetimpirenena shinoa, vanimpotoana iray nisian'ny fanamafisana ny fanarahamaso satria matetika noamin'io fotoana io ireo mpanao hetsipanoherana no mifamory manohitra ny filazan'i Shina momba ny Fari-dranomasina atsimon'i Shina. Iray tamin'ireo tena mafana fo mpanohana ireo mponina am-bohitra tao Dong Tam i Phuong, taorian'ny nanaovana bemidina tao an-tanànan-dry zareo tamin'ny Janoary 2020.
Nihaona tamin'ireo manampahefana avy amin'ny masoivoho amerikàna izy tamin'ny Febroary mba hiresaka momba ilay tranga. Nandritra ny fihaonany tamin'izy ireo, nizara ihany koa izy taratasy soratanana avy amin'ny vadin'i Le Dinh Kinh, Du Thi Thanh, niaraka tamina fijoroana vavolombelona manokana. Samy nitaky ny hisian'ny fanadhihadiana tsy miankina daholo i Phuong sy Thanh, momba ilay bemidina sy ny fampiharana ireo fepetra mitovy aminy entina hanasaziana, izay amin'izao fotoana izao dia isan'ny ao anatin'ny Global Magnitsky Act mahakasika ireo manampahefana ao amin'ny governemanta Vietnamiàna voarohirohy ho nikotrika ilay fanafihana.
Jereo ato ny antsafa manontolo: